यौनकर्मीलाई १२ घण्टा धन्दा गर्न इजाजत ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » समाचारहरु → यौनकर्मीलाई १२ घण्टा धन्दा गर्न इजाजत !
यौनकर्मीलाई १२ घण्टा धन्दा गर्न इजाजत !
April 13, 2016२३९ पटक
बेलायत । ब्रिटेनको लिड्स होलवेक इलाकामा कानूनी रुपमा नै पहिलो पटक ‘रेड लाइट एरिया’ घोषणा गरिएको छ । होलबेकमा अब यौनकर्मीहरुले बिना रोकतोक आफ्नो काम गर्न सक्ने छन् ।
यो कदमलाई देह ब्यापार नियन्त्रण गर्ने कोशिसका रुपमा हेरिएको छ । ब्रिटेनमा देह ब्यापार गैरकानूनी मानिदैन । यद्यपी सार्वजनिक ठाउँमा देहब्यापार गर्न भने रोक लगाइएको छ । तर अब भने होलबेक इलाका पनि साँझ ७ बजेबाट विहान ७ बजेसम्म बिना देहब्यापार गर्न छुट दिइएको छ ।
यो निर्णयले यौनकर्मीहरु सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीसँग अपराधबारे सिधा जानकारी दिन सक्ने प्रहरीको विश्वास छ ।
२९ वर्षीया चेल्सी (परिवर्तित नाम) पाँच वर्षदेखि यौनकर्मी छिन् । उनले यो काम निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछिन् । देह ब्यापारलाई एक जुवा ठान्छिन् । उनले देहब्यापार रहर नभइ बाध्यता भएको बताउँदै यसले अन्तिममा मृत्यु वा जिन्दगीमध्ये एक दिने बताउँछिन् ।
यो इलाका यौनकर्मी ४० महिला नियमित रुपमा सक्रिय छन् । यौनकर्मी महिलामाथि बेला बेलामा जर्बजस्ती गर्ने तथा बलात्कारका घटनाहरु पनि हुने गरेका छन् । प्रहरी, काउन्सिलले त्यस्ता पीडित यौनकर्मी महिलाहरुको उद्धार गर्ने गरेको छ ।
यौनकर्मी चेल्सी दुई वर्षअघि त्यस्तै आक्रमणको शिकार भइन् । उनलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेपछि गर्भवती भएकी थिइन् । उनलाई कुटपिट गर्नुका साथै बलाकार भएको थियो । गत डिसेम्बरमा २१ वर्षीया यौनकर्मी महिला डारिया पियों घाइते भएकी थिइन् । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । (बीबीसी)